Apartheid njem: Nigeria katọrọ mmachi ọhụrụ UK
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » Apartheid njem: Nigeria katọrọ mmachi ọhụrụ UK
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
Onye nnochite anya Naijiria na UK, Sarafa Tunji Isola
A mara ọkwa mkpebi Great Britain itinye mmachi na Nigeria na Satọde, na gọọmentị Britain na-ekwu maka otu 'ọtụtụ' nke ikpe Omicron na Britain siri jikọta 'njem esenidụt si South Africa na Nigeria.'
Naijiria bụ obodo kachasị ọhụrụ agbakwunyere na listi 'red' njem nke UK na taa. Ndepụta uhie pụtara na ọ bụ naanị ndị kwere ka ịbanye na ya UK site na ha bụ ndị UK ma ọ bụ Irish ụmụ amaala na ndị bi. Onye ọ bụla na-alọta site na mba ndị na-acha uhie uhie ga-anọrọ onwe ya maka ụbọchị iri n'ego nke ya n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ gọọmentị kwadoro. Steeti iri na otu niile dị na ndepụta dị na Africa.
N'ajụjụ ọnụ taa a gbara BBC n'ụbọchị Mọnde. Onye isi ala Naijiria na United Kingdom kagburu mmachi njem njem Britain, nke ewepụtara iji gbochie mgbasa nke ụdị Omicron ọhụrụ nke nje COVID-19.
Onye nnọchi anya Naijiria na UK, Sarafa Tunji Isola, katọrọ ụzọ ezubere iche nke gọọmentị UK na-eme bụ́ nke na-amachibido njem na mba ụfọdụ nke Africa, na-akpọ ya “apartheid njem.”
Great BritainEkwuputara mkpebi nke ịmanye mmachi na Naijiria na Satọde, na gọọmentị Britain na-ekwu maka otu 'ọtụtụ' nke ikpe Omicron na Britain si jikọta 'njem esenidụt si South Africa na Nigeria.'
Isola nke Naijiria bụ onye ọrụ mba ofesi kacha ọhụrụ na-akatọ mmachi a, ebe odeakwụkwọ ukwu UN bụ Antonio Guterres jikwara okwu ahụ bụ "apartheid njem" n'izu gara aga mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na New York. Onye isi UN kwuru na mmachi njem, dị ka nke ndị amachibidoro UK, bụ "ọ bụghị naanị na-ezighị ezi na ntaramahụhụ", kama ha na-emecha "adịghị arụ ọrụ."
Onye isi ala Ghana Nana Akufo-Addo katọkwara mba dị iche iche maka itinye mmachi na mba Africa, na-akpọ usoro ndị a "ngwaọrụ nke njikwa mbata na ọpụpụ."
Onye minista UK bụ Kit Malthouse gọnarịrị ebubo ahụ, na-ekwupụta na iji nkebi ahịrịokwu ahụ "apartheid njem" bụ "asụsụ jọgburu onwe ya." N'ịgbachitere mmachi ahụ, ọ rụrụ ụka na ha na-enye aka n'inye ndị ọrụ ahụike Britain "obere oge" ka ha rụọ ọrụ na nje a wee chọpụta etu ọ ga-esi sie ike.
Ngalaba ahụike na nlekọta ọhaneze nke UK kwụkwara na mmachi a, na-ekwupụta na gọọmentị ga-aga n'ihu na-edobe ihe egwu nwere ike ibute mba na ókèala n'otu n'otu n'ihe gbasara ọkwa ịkpachara anya achọrọ.